ကြက်ဥကို ပုံမှန်အချိန်တွေထက် နံနက်ခင်းမှာစားသင့်တဲ့ အကြောင်းရင်း (၇) ချက်ကြက်ဥကို ပုံမှန်အချိန်တွေထက် နံနက်ခင်းမှာစားသင့်တဲ့ အကြောင်းရင်း (၇) ချက်
ကြက်ဥကို အခြားသော အချိန်တွေမှာ စားခြင်းထက် နံနက်ခင်းမှာ နံနက်စာအဖြစ် စားခြင်းဟာ အောက်ဖော်ပြပါ အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ၁။ နွားနို့ ပေါင်မုန့် မီးကင် စတာတွေနဲ့ ကြက်ဥကို စိတ်ကြိုက် တွဲဖက်စားခြင်းဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အာဟာရဓာတ် ...
လက်ထပ်တော့မည့် ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်၏ မျိုးပွား အင်္ဂါကို လေးခွနဲ့ပစ်ပြီး စမ်းသပ်သည့် အာဖရိကယဉ်ကျေးမှုလက်ထပ်တော့မည့် ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်၏ မျိုးပွား အင်္ဂါကို လေးခွနဲ့ပစ်ပြီး စမ်းသပ်သည့် အာဖရိကယဉ်ကျေးမှု
လက်ထပ်တော့မည့် ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်၏ မျိုးပွားအင်္ဂါကို လေးခွနဲ့ပစ်ပြီး စမ်းသပ်သည့် အာဖရိကယဉ်ကျေးမှု ပရိသတ်ကြီးတို့ရေ ဒီတခါမှာတော့ စာဖတ်သူတို့အဖို့ အာဖရိက ယဉ်ကျေးမှု တစ်မျိုးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ဟာ အရွယ်ရောက်လာလို့ မိန်းမယူတော့မယ်ဆိုရင်သူလက်ထပ်ယူမည့် မိန်းခလေးရဲ့ဆွေမျိုးထဲက လူသုံးယောက်ကိုရွေးပြီးသူတို့တော်ရမဲ့ ယောဖဖြစ်သူရဲ့ယောက်ျားလေး ...
အိမ်ထောင်သက်(၂၅)နှစ်အတွင်းမှာ တစ်ခါမှရန်မဖြစ်လို့ မေးကြည့်လိုက်သောအခါ…အိမ်ထောင်သက်(၂၅)နှစ်အတွင်းမှာ တစ်ခါမှရန်မဖြစ်လို့ မေးကြည့်လိုက်သောအခါ…
အိမ်ထောင်သက်(၂၅)နှစ်အတွင်းမှာ တစ်ခါမှရန်မဖြစ်လို့ မေးကြည့်လိုက်သောအခါ… လင်မယားနှစ်ယောက်ဟာ သူတို့ရဲ့ အိမ်ထောင်သက်၂၅နှစ်အတွင်းမှာ တစ်ခါမှကတောက်ကဆ မဖြစ်ဖူးဘူးလို့ မြို့မှာ နာမည်ကြီး ပါတယ်။ ဒါကြောင့် …နယ်ခံသတင်းစာရဲ့ အယ်ဒီတာကအဲဒီ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကို မေးမြန်းဖော်ထုတ်ဖို့ အစီအစဉ်တစ်ခု လုပ်လိုက်ပါတယ်။ ...
နှစ်ပေါင်း ၉၀ သက်တမ်းရှိ ကမ္ဘာကျော်အလှကုန်ပစ္စည်း Revlon ကုမ္ပဏီ ဒေဝါလီခံနှစ်ပေါင်း ၉၀ သက်တမ်းရှိ ကမ္ဘာကျော်အလှကုန်ပစ္စည်း Revlon ကုမ္ပဏီ ဒေဝါလီခံ
ယခုနှစ်ပိုင်းမှာ အွန်လိုင်းပေါ် ရောင်းချမှုကို အားယူပြီး နာမည်ကြီးလာနေတဲ့ အလှကုန်တွေကြား ဈေးကွက်ခက်ခက်ခဲခဲ ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက် အကြွေးများစွာအောက်မှာ ကမ္ဘာကျော်အလှ ကုန်ပစ္စည်း Revlon က ကုမ္ပဏီ ဒေဝါလီခံဖို့ တရားရုံးမှာ လျှောက်ထားလိုက်ပါတယ်။ လက်သည်းနီနဲ့ နှုတ်ခမ်းနီ အလှကုန်ပစ္စည်းတွေကြောင့် ...
အနာအဆာကင်းပြီးလှပတဲ့ ခြေထောက်လေးရဖို့အတွက် ဂရုစိုက်နိုင်မယ့် နည်းလမ်း (၁၀) မျိုးအနာအဆာကင်းပြီးလှပတဲ့ ခြေထောက်လေးရဖို့အတွက် ဂရုစိုက်နိုင်မယ့် နည်းလမ်း (၁၀) မျိုး
တစ်နေ့ကို လူသားတွေက ပျမ်းမျှအားဖြင့် ခြေလှမ်းပေါင်း ၅ထောင်ခန့် လမ်းလျှောက်ကြပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ရဲ့သက်တမ်းမှာ သူလျှောက်ခဲ့တဲ့ ခြေလှမ်းတွေအားလုံးကို ပေါင်းလိုက်ရင် ကမ္ဘာကြီးကို ၅ ပတ်ပတ်လို့ ရပါတယ်။ နေရာတွေ အများကြီးရောက်အောင် ခေါ်သွားပေးတဲ့ ခြေထောက်ကို အမြဲတမ်း လှပကျန်းမာနေစေဖို့ ...
စီးပွားရေးလုပ်သောအခါ မုဆိုးကြီးလို ကျင့်ပါစီးပွားရေးလုပ်သောအခါ မုဆိုးကြီးလို ကျင့်ပါ
တခါတုန်းက စီးပွားရေး လုပ်ရတာ အဆင်မပြေလို့ စိတ်ညစ်နေတဲ့ လူငယ်လေး တယောက် ရှိတယ်။ သူက စိတ်ညစ်မှု တွေကို ဖြေဖျောက်ဖို့ သူ့အိမ်ရဲ့ မနီးမဝေးမှာ ရှိတဲ့ တောအုပ်လေးနားက စမ်းချောင်းလေး ဘေးမှာ အေးအေးဆေးဆေး စိတ်ဖြေရင်း ...
လူတိုင်းနီးပါးကြိုက်တဲ့အသားတုကို ဘာနဲ့ လုပ်ထားတာလဲ???လူတိုင်းနီးပါးကြိုက်တဲ့အသားတုကို ဘာနဲ့ လုပ်ထားတာလဲ???
Unicode အ သားတုဟာ ဒီနိုင်ငံမှာတော့ တော်တော်လေး အသုံးတွင်ကျယ်တယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ လမ်းဘေးတုတ်ထိုးဆိုင်လေးတွေ၊အကင်ဆိုင်လေးတွေကစပြီး၊ ခရမ်းချဉ်သီးလေးနဲ့ ချက်ထားတဲ့ အသားတု ဟင်း ၊ အသားတုဗလချောင်ကြော်လေး စသည်ဖြင့် အသုံးတွင်ကျယ်လှပါတယ်။ အသားတုကို မြန်မာနိုင်ငံမှာသာမကအာရှမှာတော်တော်များများ စားကြပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတေ့ာသက်သက်လွတ်ဟင်းပွဲတွေမှာ ...
လောကကြီး ဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲဗျာ.. ဖတ်ရင်းနဲ့ ကြက်သီးတွေထလာတယ်…လောကကြီး ဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲဗျာ.. ဖတ်ရင်းနဲ့ ကြက်သီးတွေထလာတယ်…
လောကကြီး ဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲဗျာ.. ဖတ်ရင်းနဲ့ ကြက်သီးတွေထလာတယ်… ဘုရားဘုရားလောကကြီးဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲဗျာ တောင်ငူခရိုင် ထန်းတပင်မြို့နယ် နတ်ရွာတွင် ယမန်နေ့ညနေ ၆ နာရီ ၁၅ မိနစ်အချိန်ခန့်က သားအဖနှစ်ယောက် အရက်အတူတူ သောက်စားကာ တစ်ယောက်တစ်ခွန်းစကားများရန်ဖြစ်ကာ သားဖြစ်သူ က ဓါဖြင့်ထိုးခဲ့၍ ...